पात्लेमा लोपोन्मूख शेर्पाको ‘सिली नृत्य प्रशिक्षण’
२०७६ माघ १८, शनिबार
ओखलढुङ्गा (शेर्पाखबर) । खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको पात्लेमा शेर्पा जातिको लोपोन्मूख ‘सिली नृत्य’ प्रशिक्षण सुरु भएको छ । उन्जेलामा स्मृति प्रतिष्ठान ओखलढुङ्गाको आयोजनामा खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नं. ९ पात्लेमा विहिवारवाट सिली नृत्य प्रशिक्षण शुरु भएको हो ।
शेर्पा समुदायको महत्वपूर्ण नृत्यको रुपमा लिइने सिली नृत्य प्रशिक्षणमा स्थानीय ११ जना युवाहरुले सहभागिता जनाएका छन् । शेर्पा जातिको विवाह संस्कारमा विशेष महत्वका साथ नाचिने सिली नृत्य लोप हुँदै गएको भन्दै प्रतिष्ठानले प्रशिक्षण आयोजना गरेको संयोजक लाक्पा जी शेर्पाले जानकारी दिए । नृत्य प्रशिक्षण पात्लेको दुई स्थानमा सञ्चालन गरिने छ । दुई स्थानमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षणमा २० जना भन्दा बढि स्थानीय युवाहरुले प्रशिक्षणमा सहभागीता जनाउने पनि संयोजक शेर्पाले जानकारी दिए ।
शेर्पा समुदायका अग्रज पुर्खाहरुले यो नृत्य नाच्ने गरेतापनि युवाहरुलाई पुस्तान्तरण नहुँदा नृत्य लोप हुँदै गएको छ । लोप हुदै गएको यस नृत्यको जगेर्ना गर्ने हेतुले प्रशिक्षण आयोजना गरिएको शेर्पाले बताए । तालिममा सिन्धुपाल्चोकका दुई युवाहरुले प्रशिक्षण दिईरहेका छन् । बाजेहरुले नाच्ने गरेको सिलि नृत्यलाई सिक्न स्थानीय युवाहरु विशेष चासोका साथ सहभागि भएको स्थानिय शिक्षक लाक्पा शेर्पाले बताए ।
सिली नृत्य प्रशिक्षण एक हप्तासम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ । दैनिक २ घण्टा सञ्चालन हुने प्रशिक्षण खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको वडा नं. ९ को छेर्मा्दिङ र फाप्रेमा दुई सिफ्टमा सञ्चालन हुने पनि आयोजकले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले यसअघि पनि शेर्पा संस्कृतिमा आधारित श्याब्रु नृत्य प्रशिक्षणको आयोजना गरेको थियो ।
यसैवीच, शेर्पा सञ्चार समूह ओखलढुंगाले पनि गाउँपालिकाभित्र सिली नृत्य प्रशिक्षण शुरु गर्ने जनाएको छ । उन्जेलामा स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा पुगेका सञ्चारका पदाधिकारीहरुले तत्काल प्रशिक्षण शुरु गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारका आङ दावा शेर्पाले जनाए ।
कर्मा शेर्पाका अन्य लेख तथा रचनाहरु
हामी सक्छौं (फोटो फिचर)
लोसार साँझमा शेर्पा विद्यार्थीहरु पुरस्कृत
सतुवा खेतीमा रमाउँदै सोनाम शेर्पा
पथमार्ग स्तरोन्नती गर्दै खुम्बुपासाङल्हमु गाउँपालिका
ॐमणि पद्ये हुँ र ॐअमिदेव ह्री मन्त्र जप गर्दाको फाइदाहरु
मिस एण्ड मिस्टर टिन शेर्पाको उपाधी डोल्मा र युगेनलाई
नेपाल शेर्पा संघमा १२ विभाग गठन
छाडा गीत ल्याएपछि भिटेन पक्रान प्रहरी सक्रिय
चिनियाँ लामाबारेको विवाद छानविन गर्न समिति गठन
‘ल, तिमीहरु भन त, यस गाउँपालिकाका प्रमुखको नाम के हो ?’
खुम्बुपासाङल्हमु गापामा लकडाउन प्रभावकारी भएन
शेर्पा प्रदेशबारे ‘सांसद आङ देण्डी र नेता आङकाजीको दोहोरी !’